King James Bible KJV Free အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
4.6 | 10,000,000+ ထည့်သွင်းရန်
ဒေါင်းလုပ် XAPK（13.9MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် King James Bible KJV Free
Download သင်သွားသည့်နေရာတိုင်းတွင်သင် သွား. Android အတွက်ဤဘုရင်ဂျိမ်းစ်ကျမ်းစာအက်ပလီကေးရှင်းနှင့်အတူဘုရားသခင်ထံချဉ်းကပ်ရန်ဘုရင်ဂျိမ်းစ်ကျမ်းစာ (KJV) ကိုရယူပါ။ ဤကျမ်းစာအက်ပလီကေးရှင်းတွင်ဘုရင်ဂျိမ်းစ်ယာယီဗားရှင်းပါ0င်သည်။ ရွေးချယ်ရန်ကျမ်းစာများစွာမှ KJV ကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ရရှိနိုင်သည့်ကျမ်းစာဖတ်ရှုချက်အများစုထဲမှတစ်ခုအဖြစ်ရွေးချယ်သည်။
King James Bible (KJV) သည်အင်္ဂလန်ချာ့ချ်အသင်း၏အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားတော်ဖြစ်သည် 1604 ခုနှစ်တွင် 1604 တွင်စတင်ခဲ့ပြီး 1611 ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးခဲ့သည်။
) > ★ရောမ3း 23
★ PSU 29:31 ★ဖိအား4း 13
★ရောမ 8း28
★ရောမ 8း28 ★သုတ္တံကျမ်း 3: 5
★ JERNE 14:16 ★ရောမ6း 16 ★ရောမ6း 23
★ T ★★★ကျော်ကကြယ်ငါးပွင့်များပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း! ★★★★★★★
သမ္မာကျမ်းစာတစ်ခုလုံးကိုဖတ်ရန်, နားထောင်ခြင်း, လေ့လာခြင်း, ဘယ်နေရာမှာမဆို, ဖတ်ရန်နှင့်လေ့လာရန်သင်နှင့်အတူဘုရင်ဂျိမ်းစ်ကျမ်းစာ (KJV) ကိုအလွယ်တကူယူဆောင်လာနိုင်သည်။ ဤအခမဲ့ King James Bible App သည်သင့်အားဘုရားသခင်နှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာချဉ်းကပ်ရန်စွမ်းဆောင်ချက်များစွာရှိသည်။ ★အော့ဖ်လိုင်းကျမ်းစာ
သည်အော့ဖ်လိုင်းအလုပ်လုပ်သည်။ အင်တာနက်အသုံးပြုမှုမရှိပဲ King James Bible (KJV) ကိုဖတ်ပါ။
သင့်ကိုအသံကျယ်ကျယ်ဖြင့်ဖတ်ပါ။ စာဖတ်ခြင်းအပိုင်းကိုသွားပြီး font change change ခလုတ်ကိုဘေးရှိ Audio Button ကိုနှိပ်ပါ။
Daily Disco Button
သင်၏နေ့ကိုနေ့စဉ်ကျမ်းစာအခန်းငယ်နှင့်စတင်ပါသို့မဟုတ်ဘုရင်ဂျိမ်းစ်ကျမ်းစာ (KJV Book ★နေ့စဉ်ကျမ်းစာဆက်ကပ်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း
ဘုရင်ဂျိမ်းစ်ကျမ်းစာလေ့လာရန် KJV) ကျွန်ုပ်တို့၏လွယ်ကူသော interface ကိုလွယ်ကူစွာဖြင့်။ စာအုပ်များ, အခန်းကြီးများနှင့်ကျမ်းချက်ကျမ်းကိုကြည့်ရှုပါ။ သင်အကြိုက်ဆုံးကျမ်းပိုဒ်များကိုအလွယ်တကူကြည့်ရှုနိုင်ပြီးအလွယ်တကူကြည့်ရှုနိုင်အောင်အလွယ်တကူကြည့်ရှုနိုင်အောင်အလွယ်တကူကြည့်ရှုပါ။ Bookmarks
သမ္မာကျမ်းစာအခန်းကြီးများကိုအရောင်အမျိုးမျိုးဖြင့်မီးမောင်းထိုးပြရန်မီးမောင်းထိုးပြအင်္ဂါရပ်ကိုအသုံးပြုပါ။ ထို့နောက်အလွယ်တကူသူတို့ကိုအလွယ်တကူကြည့်ရှုအလွယ်တကူရယူပါ။ ★စာဖတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ကျမ်းစာလေ့လာနေစဉ်အတွင်းအရေးကြီးသောသင်ခန်းစာများကိုမှတ်မိစေရန်သင်၏ KJV ကျမ်းစာ (KJV) အက်ပလီကေးရှင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ပါ။ ★စာသားအရွယ်အစားနှင့်စတိုင်
ချိန်ညှိပါ သင်၏အကြိုက်ဆုံးနှင့် ပတ်သက်. ကျမ်းချက်၏အရွယ်အစားနှင့်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံကိုဖတ်ရှုစေသည့် font-style ကိုရွေးပါ။
★အခမဲ့အသုံးပြုသူ Friendly Interface
ငါတို့လွယ်ကူစွာဖန်တီးခဲ့တယ် Interface ကိုအသုံးပြုရန်နှင့်ဤဘုရင်ဂျိမ်းစ်ကျမ်းစာ (KJV) app ကိုတတ်နိုင်သမျှရိုးရိုးရှင်းရှင်းသုံးရန်ရည်ရွယ်သည်
(း 2) ★ပိုမိုလွယ်ကူစွာဖတ်ရှုနိုင်
King James Bible (KJV) ကိုဖတ်သည့်အခါ font settings ကိုတိုက်ရိုက်ပြောင်းလဲပါ။ ★ Share-Share Subspirectational Bibleses ကိုမျှဝေရန်ရည်ရွယ်ထားသည်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောဘုရင်ဂျိမ်းစ်ကျမ်းစာ (KJV ကျမ်းစာ (KJV) အခန်းငယ်များအားဝေမျှပါ။
King James Bible (KJV) မှစာအုပ် 66 လုံးပါ0င်သည်။ ကမ္ဘာ ဦး ကျမ်း, ထိမ်ခြင်း, ဝတ်ပြုရာ, ဝတ်ပြုရာ, ဝတ်ပြုရာ, ဝတ်ပြုရာ, ယောရှု, တရားသူကြီး, ရုသ, 1 ရာမွေလ, 1 ရာဇဝင်ချုပ်များ,2ရာဇဝင်ချုပ်, is သတာ, is သတာ, es သတာ, ယောရှ, ယောရှသား, ယောရှမြို့သား, ဒံယေလ, ဟောရှေ, ယောလ, အာမုတ်, Ob ဗဒိ, ယောန, ဇေဖနိ, မာလခိ, မ Mattheatiah, မာလခိ, မ Mattheint ew, zecharariah,, ဗြောနိ, 1 ကောရိန္သု, 1 ကောရိန္သု, 1 ကောရိန္သု, ကောလောသဲ, 1 သက်သာလောနိတ်2ခု, တိတုအလွန်နာ, တိတု, တိတု, တိတု, တိတု, ဟေလသလူ,2ပေတရု,2ပေတရု,2ပေတရု,2ပေတရု, ဂျိမ်းစ်ဇီယာကျမ်းစာ (KJV) အက်ပ်နှင့်အတွေ့အကြုံအပြည့်အဝ, ပိုမိုချမ်းသာသောကျမ်းစာလေ့လာမှု - သင်သွားလိုသည့်အခါတိုင်းသင်သွားသည့်နေရာတိုင်းတွင်မတူပါ။
ကျွန်ုပ်တို့ကိုသင်နှစ်သက်သောလျှောက်လွှာသို့မဟုတ်ဘဝ chu နှင့်မသက်ဆိုင်ပါ လ
ဘာအသစ်လဲ King James Bible KJV Free 2.0.28